2 jid oo sahlan in ay ka iPhone wareejiyo music in android
Mase telefoonada had iyo jeer waa kala iibsiga ka kaaftoomi iyo xogta ah waxay noqon kartaa shaqo daalin. Waxaad u baahan kartaa in aad nuqulka files si gaar ah ama iska sug ee suuqa kala iibsiga si uu u dhameystiro. Bal qiyaas file 1 GB ah qaadato saacad si ay u buuxiyaan oo aad kaliya oo goobta fadhiya si ay u bilaabaan kala iibsiga soo socda. Waxaa noqonayaa mid ka niyad-jab marka aad bedesheen OS. Haddii aad ka beddelanaya iPhone in Android, wareejinta xogta noqon kartaa shaqo badan oo adag sidii labadaba OS hana u oggolaan in kala iibsiga fudud.
Haddii music, iPhone taageertaa Lugood iyo Android taageertaa music Google. Sidaa awgeed kala iibsiga uma arko fudud.
Sidaas, ma jirto hab fudud ka soo baxay? Halkan waxa ku jira laba siyaabood oo aad isticmaali karto si aad ka iPhone wareejiyo music si ay Android.
Part1: Adigoo isticmaalaya computer
Tani waxay noqon doontaa sida hab heer hoose ah wareejinta xogta gacanta ka mid folder in kale. Waxaad heli doontaa in ay ku xidhmaan telefoonada si aad u your computer oo la helo fayl ku jira qalab aad qaada music. Isticmaal cable USB ka saarayaasha kala oo ay isticmaalaan computer labada Mac ama android. Isticmaal tallaabooyinka soo socda si ay u gudbiyaan music ah.
Connect labada ee qalabka la isticmaalayo USB kala. Marka, qalabka ay ku xidhan yihiin isticmaalka daaqadaha Explorer haddii isticmaalaya daaqadaha. Tag qalab iPhone iyo geli kaydinta kala, kaasoo kaydiya music ah. Hadda ay helaan faylka in uu kaydiyaa oo dhan music aad ku galka. Ama waxaad nuqul ka kartaa ama ay doortaan oo dhan u soo jiitaa iyo dhibic.
Haddaba tag in qalab Android. Isku samee sida ay jiri doonaan kaydinta gudaha iyo kaarka SD. Isticmaal mid ka mid ah waxyaabaha soo socda si music dukaanka. Haddii ay jirto music folder jiitaa sii jeedi music ka folder iPhone ama waxaad samayn kartaa mid ka mid folder iyo jiididda iyo hoos u faylasha loo baahdo.
Hubso in aadan ku dhibin labadaba qalabka iyo xidhiidh. Waqtiga ay qaadato waxay ku xirnaan doontaa tirada faylka wareejiyo. In kastoo habkan ma abaabulo music ku ool ah sida Lugood ama Play Google sameeya, laakiin waxaad had iyo jeer waxay abaabuli karaan ka dib music la wareejiyo.
Part2: Wondershare Trans Mobile - talinayo
Wondershare Mobile Trans waa software caan ah oo u maleeyay in ay tahay aalad premium, waxa aanu shaqada badan si fudud. Waxa inta badan ka sahlan in ay isticmaalaan sida navigation waa is-hanuuniyey iyo interface waa dareen leh. Wondershare MobileTrans Taageero ka badan 3000 oo lagu daydo of smartphone badan dhufto ee OS kala duwan iyo in ka badan shabakadaha kala duwan. Halkan waxa ku jira qaababka yar:
Waxaa ku wareejinaya music, videos, sawiro, barnaamijyadooda, abuse call iyo qaar badan oo si fudud.
Waxa ay taageertaa OS oo dhan sida Android, macruufka iyo Nokia Symbian. Waxaa la og yahay in ay taageeraan 3000 casriga ah.
Interface waa dareen leh oo u fududaynaysa inta lagu jiro hanaanka wareejinta.
Waa halis free sidii loo sameeyaa iyadoo la isticmaalayo your computer sida dhexdhexaadka ah.
Shuruudaha ee geedi socodka, kuwaas oo
Windows ama Mac pc
Cable USB labada telefoonada.
Sidee si ay u gudbiyaan music ka iPhone in Android fudud
Step1: Waxaad software goobta rasmiga ah ee Wondershare soo bixi kartaa. Waxaa jira labada versions Windows iyo macruufka. Waxaa rakib badan kombiyuutarka.
Step2: Hadda abuurtaan software ah oo taga si ikhtiyaar buluug ah taas oo ah inay telefoonka kala iibsiga telefoonka. Waa habka tooska ah si ay u kala iibsiga iyo qaato mid ka mid ah oo kaliya click.
Step3: On screen soo socda waxaa laga baarayo doonaa hindiseen. Connect aad iPhone iyo Android isticmaalaya cable USB kala. Hubi in isticmaalka saaridda bixiyeen telefoonada sidii ay leedahay isku xirnaanta ka wanaagsan oo waa amaan.
Step4: Marka qalabka ay ku xidhan yihiin. Dooro iPhone oo ah isha ugu dooro meesha aad u socoto sida Android phone. Waxaad awoodi doontaa in aad aragto labada telefoonada.
Ha ku qaataan saacado hawl yar sida xogta iyo warbaahinta ka mid phone mid kale ku wareejiyo. Ha Wondershare shuqulka hawsha u sameeyo inta aad dib ugu fadhiisan, dejiso oo aad shuqulkaaga oo aad samaysid waxa kale oo muhiim ah!
Step5: Haddaba tag guddi dhexe oo dooro content music ah. Waxaad ka arki kartaa sida badan heeso aad wareejinta waxaad ka phone jir ah u phone cusub android.
Step6: Marka aad hubto in ay dejinta iyo doorashada dhamaato, guji koobiyeynta bilowga.
Waxaad ka arki kartaa horumarka ee suuqa kala horumarka. Markii loo qaato waxay ku xirnaan doontaa tirada files music ah iyo in la hubiyo xiriir USB ah mid deggan in ay ka fogaadaan wax kasta oo imaanshada. Mar haddii aad dhameyso, waxaad eegi phone cusub ee files music aad telefoon android ah.
Labada hababka ay yihiin nabad iyo xasilooni. Si kastaba ha ahaatee, wax muhiim ah oo aad u isticmaali cable USB wanaagsan in la sameeyo xidhiidh hana dhibin ilaa dhammaan tallaabooyinka ay dhammaystirmaan. Si aad u badan oo ku saabsan software iyo sida loo isticmaalo iyaga soo booqan rasmi ah goobta Wondershare iyo akhriso hagahaan waxay ogaan.
> Resource > Transfer > 2 Siyaabaha ka iPhone wareejiyo music in android